Gaari Dagaal Oo Dowlada Federaalka Laga Qabsaday. – Bogga Calamada.com
Gaari Dagaal Oo Dowlada Federaalka Laga Qabsaday.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar dhabba gal ah u dhigay labo gaari oo noocyada dagaalka ah kuwaasi oo ay la socdeen maleeshiyaat ka tirsan dowlada Ridada federaalka.
Kolanyada kamiinka loo dhigay ayaa ku socdaalayay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye gaar ahaan deegaan weynaha Lafoole.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in ciidamada Mujaahidiinta ay gacanta ku dhigeen mid ka mid ah gaadiidka dagaalka dowlada federaalka’iyadoona sidoo kale kamiinkaasi lagu dilay tiro askar ah oo Murtadiinta ka tirsan.
Kamiinkan ayaa kusoo aadaya xilli maalintii shalay howlgal ciidamada Mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka degmada Afgooye lagu dilay saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka kuwaasi oo xilligii la dilayay dhac iyo boob xoogan ku hayay Rakaab la socday mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha shacabka.